शब्दसँग शक्ति छ, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
मलाई यो फिल्मको नाम याद छैन। म कथाकथा वा कलाकारहरूको नाम सम्झिन। तर मलाई एउटा खास दृश्य याद छ। नायक कैदीको युद्धको शिविरबाट भागेको थियो र सेनाको पछि-पछि खेद्दै नजिकैको गाउँमा भागेको थियो।
जब ऊ एकदमै लुक्ने ठाउँ खोज्दै थियो, अन्तमा ऊ एउटा भीडभाडिएको थिएटरमा डुबे र त्यहाँ एउटा ठाउँ भेट्टायो। तर चाँडै उनलाई थाहा भयो कि चार वा पाँच जेल कारागारहरू थिएटरमा छिरे र बन्द गर्न बन्द गरे। उनका विचारहरू दौडमा थिए। उसले के गर्न सक्थ्यो? त्यहाँ अरू कुनै तरिका थिएन र उसलाई थाहा थियो कि यदि सजिलै पर्यटकले थियेटर छोडे भने ऊ सजिलै चिन्न सकिन्छ। एकाएक उहाँसँग एक विचार आयो। यो आधा अँध्यारो थिएटरमा उफ्रियो र करायो: «आगो! आगो! आगो! भीड भयभीत भयो र हतारिएर बाहिर निस्के। भीडले मिसाएको नायकले अवसरको फाइदा उठायो, रक्षकहरूको पछि लाग्यो र रातमा गायब भयो। मलाई यो दृश्य एउटा महत्त्वपूर्ण कारणको लागि याद छ: शब्दहरूसँग सामर्थ्य हुन्छ। यो नाटकीय घटनामा, एउटा सानो शब्दले धेरै मानिसहरूलाई डरायो र उनीहरूको जीवनको लागि भाग्यो!
हितोपदेशको पुस्तक (१ 18,21:२१) हामीलाई सिकाउँछ कि शब्दहरूसँग जीवन वा मृत्यु ल्याउने शक्ति हुन्छ। राम्रोसँग छनौट गरिएका शब्दहरूले चोट पुर्‍याउन सक्छन्, उत्साहलाई मार्न र मानिसहरूलाई पछाडि समात्न सक्छन्। राम्रा-छनौट गरिएका शब्दहरू निको हुन, प्रोत्साहित गर्न र आशा प्रदान गर्न सक्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा अन्धकारमय दिनहरूमा विन्स्टन चर्चिलले सिपालुपूर्वक छनौट गरेको र राम्ररी पढेका शब्दहरूले मानिसहरूलाई साहस दियो र घेरा लगाइएका अ English्ग्रेजी जनताको धीरज पुनर्स्थापित गर्यो। भनिन्छ कि उनले अ language्ग्रेजी भाषा परिचालन गरे र त्यसलाई युद्धमा पठाए। शब्दहरूको शक्ति कत्तिको शक्तिशाली हुन्छ। तपाईं जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले हामीलाई पज र सोच्न लगाउनु पर्छ। यदि हाम्रो मानव शब्दहरूको यत्तिको शक्ति छ भने, परमेश्वरको वचन कत्तिको बढ्ता छ? हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रले हामीलाई देखाउँदछ कि "परमेश्वरको वचन जीवित र शक्तिशाली छ" (हिब्रू १०: २)) यो एक गतिशील गुणवत्ता छ। यो ऊर्जा छ। यसले चीजहरू हुन्छ। यो काम अरू कसैले गर्न सक्दैन। यसले केवल सूचित गर्दैन, यसले चीजहरू गर्छ। जब येशू मरुभूमिमा शैतानको प्रलोभनमा पर्नुभयो, उहाँले शैतानको विरूद्ध लड्न र छुटकारा दिन एउटा हतियार मात्र छान्नुभयो: “यो लेखिएको छ; यो लेखिएको छ; यो लेखिएको छ, "येशूले जवाफ दिनुभयो - र शैतान भागे! शैतान शक्तिशाली छ, तर धर्मशास्त्र अझ शक्तिशाली छ।
हामीलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति
तर परमेश्वरको वचनले चीजहरूलाई मात्र सम्पन्न गर्दैन, यसले हामीलाई परिवर्तन पनि गर्दछ। बाइबल हाम्रो जानकारीको लागि लेखिएको थिएन, तर हाम्रो परिवर्तनको लागि हो। समाचार लेखहरूले हामीलाई सूचित गर्न सक्दछ। उपन्यासहरूले हामीलाई प्रेरणा दिन सक्दछन्। कविताहरु हामीलाई खुशी पार्न सक्छन्। तर केवल परमेश्वरको शक्तिशाली वचन हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक प्राप्त भएपछि, परमेश्वरको वचनले हामीमा काम गर्न थाल्छ र हाम्रो जीवनमा जीवित शक्ति बन्छ। हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुन थालेको छ र हामी फल फलाउँदैछौं (२ तिमोथी :2:१:3,15 - १;; १ पत्रुस २: २)। परमेश्वरको वचनसँग त्यस्तो शक्ति छ।
हामी छक्क छौं? जब हामी २ तिमोथी :2:१:3,16 मा पढ्दैनौं: "किनकि सबै धर्मशास्त्र परमेश्वरद्वारा लेखिएको छ", ("भगवान-सास" ग्रीकको सहि अनुवाद हो)। यी शब्दहरू केवल मानव शब्दहरू मात्र छैनन्। तिनीहरू ईश्वरीय मूलका हुन्। ती उही परमेश्वरका शब्दहरू हुन् जसले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो र सबै थोक उहाँकै शक्तिशाली वचनले ग्रहण गर्नुभयो (हिब्रू .11,3.२1,3; .XNUMX .१XNUMX) तर ऊ बाहिर जान्छ र केहि गर्छ भने उसले हामीलाई आफ्नो वचनले एक्लै छोड्दैन। उहाँको वचन जीवित छ!
"हजारौं जsts्गलहरू बोक्ने काँडाजस्तै, परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रमा सीलोमा निन्दित बीउजस्तै छ जुन मेहनती बीउ छर्ने बीजको लागि मात्र पर्खिरहेको छ र उर्वरा हृदयको लागि उसलाई प्राप्त गर्न » (क्राइष्टको प्रधान व्यक्ति: चार्ल्स स्विन्डोलद्वारा लिखित हिब्रूहरूको अध्ययन, पृ। 73)।
ऊ अझै बोलेको शब्द मार्फत बोल्छ
त्यसोभए बाइबल पढ्नमा गल्ती नगर्नुहोस् केवल तपाईले गर्नु भएको कारण वा यो गर्नु भनेको सहि कुरा हो। तिनीहरूलाई एक यांत्रिक तरीकाले नपढ्नुहोस्। यसलाई नपढ्नुहोस् किनभने तिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि यो परमेश्वरको वचन हो। बरु, बाइबललाई परमेश्वरको वचनको रूपमा हेर्नुहोस् जुन तिनीहरू आज बोल्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा, ऊ अझै पनि उसले भनेको कुराबाट बोल्दछ। यसको शक्तिशाली वचन पाउन हामी कसरी आफ्नो हृदयलाई फलदायी बनाउन तयार पार्न सक्छौं?
प्रार्थनापूर्वक बाइबल अध्ययनको माध्यमबाट। यशैया 55,11:११ मा यसो भनिएको छ: "मेरो मुखबाट निस्केको वचन पनि यस्तो हुनुपर्दछ: यो मेरो खाली ठाउँमा फर्किनेछैन, तर मेरो इच्छा अनुसारको हुनेछ र मैले पठाएकोमा ऊ सफल हुनेछ। । » जोन स्टटले एक एयरपोर्टमा सुरक्षा गेटबाट हिँड्ने भटक प्रचारकको कथा सुनाउँदछ। यो इलेक्ट्रोनिक स्क्यानिंग अघि हो र सुरक्षा गार्ड आफ्नो जेबमा भुनरहेको थियो। उनले एक कालो कार्डबोर्ड बक्स भेट्टाए जसमा प्रचारकको बाइबल थियो र यसका सामग्रीहरू फेला पार्न उत्सुक थियो। "यो बक्समा के छ?" उनले शicious्कास्पद हुँदै सोधे र चौंकाउने जवाफ पाए: "डाइनामाइट!" (दुई संसार बीच: जोन स्टट)
परमेश्वरको वचनको एक कत्ति उपयुक्त वर्णन - एक शक्ति, एक विस्फोटक शक्ति - जसले पुरानो बानीलाई "विस्फोट" गर्न सक्दछ, झुठो विश्वासलाई तोड्न, नयाँ भक्तिलाई प्रज्वलित गर्न र हाम्रो जीवनलाई निको पार्न पर्याप्त उर्जा छोड्न सक्छ। के बाइबल पढ्नको लागि यो कुनै बाध्यकारी कारण परिवर्तन गर्नुपर्दैन?